Kusize ILANGA kobexoshwa esibhedle - Ilanga News
Home Izindaba Kusize ILANGA kobexoshwa esibhedle
Kusize ILANGA kobexoshwa esibhedle
Ukhishwe ekwi-coma odokotela bethi akukho abangamsiza ngakho
ULWANDILE Mnguni osekuyophela isonto lesibili engaphaphami emuva kokuba kuthiwa wadubuleka kade kunembizo ye-ANC kwaqhunyiswa izibhamu.
BESEKUPHELE amathemba emndenini wa-kwaMnguni, eClermont, eThekwini, oyalelwe yisi-bhedlela iRK Khan, eChatsworth, eThekwini, ukuba ulande indodana yawo ikwi-coma ngoMsombuluko ngoba sithi kayikho into esingayisiza ngayo emuva ko-kuba kutholakale ukuthi kubhajwe inhlamvu yesibhamu ebuchosheni bayo.
Lo mndeni uthe ukuphefumula izolo ngoLwesithathu emuva kokuba ILANGA lixhumane noMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, liwazisa ngosizi lwawo. Umnyango uthe usuthumele ithimba lamlanda uLandile Mnguni (12) nge-ambulensi wayiswa esibhedlela esinochwepheshe nemishini ezokwazi ukumsiza.
Kuthiwa uLandile wavele wa-shayeka phansi mhla ka-3 kuMfu-mfu (October) kade edlala nezinye izingane.
UNkz Silindile Ngcobo oyilungu lomndeni, uthi ngosuku lwesigameko kwakukhona amalungu e-ANC erenki yakule ndawo, eqhumisa izibhamu emoyeni ekhankasa. Usola ukuthi inhlamvu yabuya phezulu yashaya ingane.
“Inkinga esibhekene nayo njengamanje, wukuthi selokhu ingane yalimala mhla ka-3 kayilutholi usizo. E-RK Khan bathi bazamile ukuyicelela usizo e-Inkosi Albert Luthuli Central Hospital ukuba ihlinzwe kukhishwe inhlamvu, kodwa (abaseNkosi Albert) bathi ngeke bayisize ngoba inhlamvu isendaweni ebucayi, uma ikhi-shwa, ingane ingafa nokufa.
“Bathi inhlamvu bazoyibulala uphoyizini, kodwa bangayikhiphi. NgoMsombuluko basifonele abaseRK Khan bathi masimlande umntwana. Sifike khona isimo sa-khe sishintshile, esaqulekile engakwazi ukudla. Uphila nge-drip.
“Sivele saxakeka nje ukuthi uma kuthiwa masimthathe sizofika simenzenjani ekhaya engadli nokudla futhi engaphaphamile. Basiphoqile ukuba simthathe enjalo, sagcina simthathile,” ku-sho UNkz Ngcobo.
Uthi isimo sikaLandile sivele sashintsha ebusuku ngawo uMsombuluko, bamphindisela esibhedlela. Ngokusho kukaNkz Ngcobo, udokotela obesebenza ebusuku ubatshele ukuthi ubengazi ukuthi ingane ikhishiwe, ubethi idlulise-lwe kwesinye isi-bhedlela.
Uthi sekubacacele ukuthi lesi sibhedlela ngeke sisabasiza njengoba sesivele sishilo ukuthi kasinayo into esingasiza ngayo ingane njengoba isinqatshwe yisi-bhedlela esikhulu, i-Inkosi Albert Luthuli.
“Ukumbuyisela kwethu kulesi sibhe-dlela kubukela ku-ngeke kushintshe lutho. Sesicela ihhovisi likaNgqongqoshe we-zeMpilo KwaZulu-Natal (Nks Nomagugu Simelane) lingenelele, lisho lona ukuthi ingane ingasizakala kanjani,” kusho uNkz Ngcobo.
Okhulumela uMnyango weze-Mpilo KwaZulu-Natal, uMnu Nto-kozo Maphisa, uthe unnyango ukhathazekile ngalezi zinsolo.
“Siyalibonga iphephandaba ngokusazisa ngalolu daba. Emuva kokuba lisithintile, umntwana ulandwe yi-ambulensi waphuthunyi-swa esibhedlela esinochwepheshe nemishini esezingeni eliphezulu.
“Siwumnyango sesijube abaphathi besibhedlela umntwana aqale wafikela kuso ukuba bathumele umbiko ogcwele ozochaza ukuthi isimo sakhe silandelwe ngendlela efanele yini ngesikha-thi esesibhedlela.
“Okuqukethwe yilo mbiko kuzobe sekucutshungulwa besekuthathwa isinqumo kusukela lapho,” kusho uMnu Maphisa.
UMnu Nhlakanipho Ntombela okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal, uthe bebengakaluzwa udaba basazoluphenya. Uthe useludlulisele ku-Nks Simelane (ungqongqoshe).
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol The-mbeka Mbhele, uthe imithetho yelayisense yesibhamu ikubeka ku-cace ukuthi akuvumelekile ukudubula emoyeni nendlela futhi kunendlela yokuphatha isibhamu emphakathini nasekhaya.
Ube eseyalela umndeni ukuba unikele emaphoyiseni uvule icala lokuzama ukubulala.
Previous articleUmqeqeshi akajabule ngabeBafana
Next articleUgwaze isoka efuna imali yokukhipha ‘isisu’